ဖီဝကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဖီဝကန်၌ အန်နာပူရတောင်တန်း၏ အရိပ်ထင်နေပုံ
28°12′51″N 83°56′50″E﻿ / ﻿28.21417°N 83.94722°E﻿ / 28.21417; 83.94722ကိုဩဒိနိတ်: 28°12′51″N 83°56′50″E﻿ / ﻿28.21417°N 83.94722°E﻿ / 28.21417; 83.94722
၁၂၂.၅၃ km2 (၄၇.၃၁ sq mi)
၄ km (၂.၅ mi)
၂ km (၁.၂ mi)
၄.၄၃ km2 (၁.၇ sq mi)
၈.၆ m (၂၈ ft)
၂၄ m (၇၉ ft)
၀.၀၄၆ km3 (၀.၀၁၁ cu mi)
၇၄၂ m (၂,၄၃၄ ft)
Tal Barahi (तालबाराही), Temple
ဖီဝကန် သည် နီပေါနိုင်ငံ၊ ပိုခါရာမြို့တွင် တည်ရှိသည့် သန့်ရှင်းကြည်လင်သည့် ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဤရေကန်ကို ယခင်က ဘိုင်ဒမ်တယ် ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ပိုခါရာလွင်ပြင်၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ပိုခါရာလွင်ပြင်သည် ပိုခါရမြို့တွင် ပါဝင်ပြီး ဆာရန်ကော့ (Sarangkot) နှင့် ကတ်ကိကော့ (Kaskikot) တို့၏ အစိတ်အပိုင်းများအဖြစ်လည်း ပါဝင်သည်။ ရေကန်သည် ချောင်းမှရေစီးဝင်သည့် ကန်ဖြစ်ပြီး ဆည်တစ်ခုက ရေကို ထိန်းသိမ်းပြုပေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရေကန်သည် တစ်စိတ်တဒေသ သဘာဝသန့်ရှင်းသည့်ရေကန်တစ်ကန် ဖြစ်သည်။ ဤရေကန်သည် နီပေါနိုင်ငံတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေကန်တစ်ကန် ဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံ၊ ဂန်ဒကီပရာဒေ့ရှိ ရာရာကန် သည် နီပေါ၌ အကြီးဆုံး ဖြစ်သည်။ ဖီဝရေကန်သည် နီပေါနိုင်ငံတွင် လူသိများထင်ရှားဆုံးနှင့် လာရောက်လည်ပတ်သူအများဆုံး ရေကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ နီပေါနိုင်ငံရှိ ရေကန်များထဲတွင် ရေကန်၌ အလယ်ဗဟို၌ Tal Barahi Temple ကျောင်းတော် တည်ရှိသည့် တစ်ခုတည်းသော ရေကန်လည်း ဖြစ်သည်။ ဖီဝကန်သည် ပင်ယ်ရေမျက်နှာပြင်အထိက ၇၄၂ မီတာ (၂၄၃၄ ပေ) အမြင့်၌ တည်ရှိပြီး ဧရိယာအားဖြင့် ၄.၄၃ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁.၇ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းသည်။ ပျမ်းမျှရေအနက်သည် ၈.၆ မီတာ (၂၈ ပေ) မြင့်ပြီး အမြင့်ဆုံးရေအနက်မှာ ၂၄ မီတာ (၇၉ ပေ) ရှိသည်။ အများဆုံးသောရေထုထည်ပမာဏမှာ ခန့်မှန်းခြေ ၄၃,၀၀၀,၀၀၀ ကုဗမီတာ (၃၅၀၀၀ ဧကပေ) ရှိသည်။ အန်နာပူရတောင်တန်းသည် မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ရေကန်မှနေ၍ အဖြောင့်အတိုင်းသွားမည်ဆိုပါက ၂၈ ကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ရေကန်သည် Machhapuchhre တောင်နှင့် အခြားသော တောင်ထိပ်များဖြစ်သည့် Annapurna နှင့် Dhaulagiri တို့၏ တောင်အရိပ်များသည် ကန်ရေပြင်တွင် အရိပ်လာထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့် ထင်ရှားသည်။ Tal Barahi ကျောင်းတော်သည် ကန်ထဲတွင် ကျွန်းတစ်ခုသဖွယ် တည်ရှိလျက်ရှိသည်။ ရေကန်သည် Chipledhunga မြို့၏အလယ်မှ လေးကီလိုမီတာအကွာတွင် တည်ရှိသည်။
၂ ကန်၏ စီးပွားရေး
ကန်၏ အနည်ကို လေ့လာဆန်းစစ်သည့်အခါတွင် ကန်၏ သက်တမ်းသည် BC 12640 – 12025 ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။ သို့သော်လည်း ဖီဝကန်သည် ဘီစီ ၁၃၀၀၀ ခန့်အတောအတွင်းက ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ယူဆကြသည်။
ဖီဝကန်နှင့် ရေပေါ်ကစားနည်းများသည် ဖီဝမြို့တော်၏ ခရီးသွားများအား အဓိကဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည့် အရာများ ဖြစ်သည်။ ကန်၏ မြောက်ဘက်ကန်ဘောင်အစပ်ကို ခရီးသွားများနေရာအဖြစ် ဖော်ဆောင်ခဲ့ပြီး ထိုနေရာကို Lakeside ဟု ခေါ်ကြသည်။ ထိုနေရာတွင် ဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် ဘားများပါဝင်သည်။ ဖီဝကန်၏ ရေထွက်ပေါက်မှ ကန်ရေကို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဖီဝစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်အဆောက်အအုံ (Phewa Power House) သည် ကန်၏ တောင်ဘက်အပိုင်းမှ ၁.၅ ကီလိုမီတာ (၀.၉၃ မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ကန်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုမူ စီးပွားဖြစ်ငါးဖမ်းရာနေရာအဖြစ် အသုံးပြုလျက်ရှိသည်။
တယ်ဘရာဟိကျောင်းတော် (Tal Barahi Temple) သည် ဖီဝကန်၏ အလယ်ခေါင်တွင် တည်ရှိသည်။ ဤကျောင်းတော်သည် ပိုခါရာမြို့တွင် အရေးအပါဆုံးသော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အထပ်နှစ်ခုပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘုရားသည် ဟိန္ဒူဘာသာနတ်ဘုရားများထဲမှ တစ်ဦးဖြည့် Vishnu ကို ရည်ညွှန်းထားသည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။ ဤကျောင်းတော်သည် တနင်္ဂနွေနေ့များ၌ အမြဲတမ်းလူထူထပ်လေ့ရှိသည်။
ဘိုင်းဒမ် - ဖီဝကန်၏ အရှေ့ဘက်ကန်ဘောင်ဖြစ်ပြီး Landside ဟု သိကြသည်။ ဤနေရာတွင် ဟိုတယ်များ၊ အငှားခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ စာအုပ်ဆိုင်များနှင့် အမှတ်တရဆိုင်ခန်းများသည် အဆုံးမရှိနိုင်ဟုပင် ထင်မြင်ရလောက်စွာ သွယ်တန်းရှည်လျားစွာပင် တည်ရှိသည်။ ထိုနေရာသည် နီပေါနိုင်ငံ၏ အကျော်အကြားဆုံးသော ခရီးသွားများဆွဲဆောင်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာသည် ပိုခါရာမြို့၏ စတင်လည်ပတ်ရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
ဆာရန်ကော့ နှင့် ပါရာဂလိုက်ဒင်း (Paragliding) - ဆာရန်ကော့သည် နီပေါနိုင်ငံ၌ ပါရာဂလိုက်ဒင်း ကစားနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသော နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ဖီဝကန်အပေါ်တွင် ထိုအားကစားနည်းဖြင့် ပျံသန်းကာ ကစားနိုင်သည်။
ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတွင် ကန်ရေပြင်တွင် အရိပ်ထင်နေပုံ
↑ Shrestha, P (2001). "Management of Aquatic Macrophyte Resource: A Case of Phewa Lake, Nepal". Environment and Agriculture: Biodiversity, Agriculture and Pollution in South Asia: 99–107. Ecological Society (ECOS). Archived 1 February 2014 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 1 February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Aryal, Vijay (28 October –2November 2007). "Phewa Lake Watershed Area: A Study on the Challenges to Human Encroachment". Proceedings of Taal 2007: The 12th World Lake Conference, Jaipur, India: 2292–2299. International Lake Environment Committee. [လင့်ခ်သေ]
↑ Rai, Ash Kumar (2000). "Evaluation of natural food for planktivorous fish in Lakes Phewa, Begnas, and Rupa in Pokhara Valley, Nepal". Limnology 1 (2): 81–89. doi:10.1007/s102010070014.
↑ Shrestha၊ Purushottam (2003)။ Conservation and management of Phewa Lake ecosystem, Nepal 1–4။ Aquatic Ecosystem Health and Management Society။ 8 October 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pokharel၊ Shailendra (2003)။ Lessons from Nepal on DevelopingaStrategic Plan for the Integrated Lake Basin Management: Conservation of Phewa Lake of Pokhara, Nepal။ International Lake Environment Committee: World Lake Database။3February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 November 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gulia၊ K. S. (2007)။ "Himalayan Treks in Nepal"။ Discovering Himalaya: Tourism of Himalayan Region။ Delhi, India: Isha Books။ p. 63။ ISBN 978-81-8205-410-3။
↑ Giri, Bikash (2008). "Seasonal Diversity and Population Status of Waterbirds in Phewa Lake, Pokhara, Nepal". Journal of Wetlands Ecology 1 (1/2): 3–7. doi:10.3126/jowe.v1i1.1568.
↑ Shrestha၊ Nanda R. (1997)။ "Pot Goes Pop on Kathmandu's Freak Street"။ In the Name of Development: A Reflection on Nepal။ Lanham, Maryland: University Press of America။ p. 163။ ISBN 0-7618-0758-6။
↑ "Field Workshop on Geology and Natural Hazards Along the Kaligandaki Valley, Central–West Nepal Himalaya" (2005-10-01). Gondwana Research 8 (4): 631–634. doi:10.1016/s1342-937x(05)71168-0. ISSN 1342-937X.
↑ Gurung, Tek B. (2005). "Participatory fisheries management for livelihood improvement of fishers in Phewa Lake, Pokhara, Nepal". Himalayan Journal of Sciences3(5). ISSN 1727-5210.
↑ Rai, Ash Kumar (2008). "Environmental Impact from River Damming for Hydroelectric Power Generation and Means of Mitigation". Hydro Nepal. Journal of Water, Energy and Environment 1 (2): 22–25. doi:10.3126/hn.v1i0.881. ISSN 1998-5452. Archived3February 2014 at the Wayback Machine. မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။3February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pantha, M. B. (19–21 October 1994). "Sustainable Development of Inland Fisheries Under Environmental Constraints in Nepal". Regional Symposium on Sustainable Development of Inland Fisheries Under Environmental Constraints FAO Fisheries Report (FIRI/R512 Suppl): 129–140. Bangkok, Thailand: Indo-Pacific Fishery Commission, IPFC Working Party on Inland Fisheries. ISSN 0429-9337.
↑ SAARC TOURISM Nepal။4March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3December 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဖီဝကန်&oldid=641130" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။